Vaovao momba ny iPhone | IPhone News (Pejy 22)
Mandà ara-dalàna ny fivarotana iPhones efa niasa i India
Ireo mpitondra firenena dia tsy mipetraka tsara amin'ny Apple mipetraka eo an-dalambe amin'ny alàlan'ny telefaona efa niasa, nolavin'izy ireo tamin'ny fomba ofisialy ny fangatahan'i Tim Cook.
Mpivarotra Apple miomana hanao fampisehoana nanowire ho an'ny iPhone 7?
Mpamatsy Apple dia miomana hiatrika fampisehoana nanowire, saingy ho an'ireo iPhone 7 ireo fampirantiana ireo?
Apple Music sy Spotify fampidirana tonga amin'ny SoundHound
Ny mpanampy virtoaly an'i SoundHound, OK Hound, dia tonga amin'ny fanavaozana vaovao miaraka amin'ny fampidirana Apple Music sy Spotify.
Facebook Moments dia efa miasa any Espana, tsy araka ny tokony ho izy
Tonga amin'ny kaontinanta taloha ny kinova Facebook iray efa "decaffein" ary nanala ny fanahin'ny fampiharana manontolo.
Ity tweak vaovao ity dia ahafahantsika mandefa hafatra avy amin'ny Pebble
Misaotra ny fiovan'ny TextSender momba ny Pebble afaka mamaly ireo hafatra voarainay avy amin'ny Pebble izahay nefa tsy mampiasa ny iPhone.
Famintinana isan-kerinandro vaovao izay ampisehoanay anao ny famintinana ny vaovao tsara indrindra izay nanodidina ny iPhone manokana ary ny Apple amin'ny ankapobeny
Apple AirPort vaovao dia mety ho valinao amin'ny Amazon Echo sy Google Home
Taorian'ny tsaho maro momba ny Amazon Echo nataon'i Apple dia dinihintsika ny mety ho AirPort vaovao ity, toa manome famantarana i Apple.
Ny fitsapana faharetana farany an'ny iPhone 6s sy Galaxy S7
Ity ny fitsapana fanoherana azo antoka ny iPhone 6s sy ny Samsung Galaxy S7, ary ny marina dia mahatohitra kokoa ny iPhone 6s.
Ny fizarana Apple dia nitombo 9% taorian'ny nanambaran'i Warren Buffett $ 1.000bn
Niakatra indray ny fizarana Apple ary toa manondro ny zava-drehetra fa noho ny fampiasam-bola mitentina 1.000 tapitrisa dolara nataon'i Warren Becket.
Tsy maintsy mivarotra vokatra vita any India i Apple raha te hanokatra Apple Stores ao amin'ny firenena izy
Toa nanome olana bebe kokoa ny governemanta Indiana noho ny tadiavin'ny orinasa monina ao Cupertino hiaro ireo mpanamboatra ny firenena.
Afaka nanamboatra ny Apple TV i Apple tamin'ny alàlan'ny fampidirana fiasa vaovao
Ny tsaho farany dia milaza fa afaka manangana kinova vaovao amin'ny Apple TV ilay orinasa mba hifaninana amin'ny Amazon Echo sy Google Home.
Apple dia miasa mba hanitarana ny Apple Pay any amin'ny firenena maro
Apple Pay dia iray amin'ireo zava-baovao lehibe nanombohan'ny orinasan-tserasera Cupertino efa ho roa ...
Apple dia nihevitra ny hividy Time Warner
Rehefa mandeha ny volana dia mianatra bebe kokoa momba ny fahalianana nasehon'i Apple tamin'ny fividianana ny Time Warner ho an'ny serivisy fahitalavitra tariby izy.
HBO any Espana miaraka amin'ny Vodafone ny HBO
Ilay mpamokatra amerikana lehibe hafa HBO dia nanambara ny fahatongavany tany Espana volana vitsivitsy lasa izay. Fantatsika izao fa avy amin'ny tanan'i Vodafone izany
Nohavaozina ny TVShow Time hisolo ny kiheba "Activities"
mamela antsika hitazona fanaraha-maso henjana momba ny andian-dahatsoratra misy antsika, rehefa hivoaka ireo toko vaovao sy ny fomba hijerena azy ireo.
Veloma Apple Music, nahafinaritra raha naharitra ...
Ireo no antony tsy nahombiazan'ny Apple Music tamim-pahombiazana, ary ny Spotify dia mitombo isan'andro isan'andro, isam-bolana.
Foxconn dia soloina robot ny mpiasa 60.000
Ny orinasa mpanamboatra ny fitaovana ampiasain'ny orinasa, Foxconn dia nanolo ny asa 60.000 tamin'ny robot, ary tsy irery izy io.
Na dia mampiasa iPhone aza ny filohan'ny abidia dia manamafy fa manome finday tsara kokoa i Samsung
Ny filohan'ny abidia, Google teo aloha, dia manamafy fa na eo aza ny fampiasana iPhone 6s, Galaxy S7 dia telefaona tsara kokoa
Apple dia liana amin'ny famoahana tobin-tsolika ho an'ny fiara elektrika
Apple amin'izao fotoana izao ankoatry ny fifantohana amin'ny Apple Car, dia mitady tobim-piantsenana hainganana haingana ho an'ny fiara elektrika ho avy ny orinasa
Apple Updates AirPort Extreme, Express, ary Time Capsule Firmware
AirPort Express, AirPort Extreme, ary AirPort Time Capsule fitaovana dia nahazo fanavaozana firmware ho fanatsarana ny fahombiazany.
Fampitahana hafainganam-pandeha eo amin'ny iOS 9.3.2 sy ny beta voalohany an'ny iOS 9.3.3
Asehonay aminao ny fampitahana haingana amin'ny iOS 9.3.2 sy ny beta voalohany amin'ny iOS 9.3.3 izay natombok'i Apple roa andro lasa izay
Nanaitra ireo vokatra Xiaomi nirehitra ny vondrona eropeana
Ny vondrona eropeana dia namoaka fanambarana fiarovana momba ny vokatra Xiaomi sy ny fironany hirehitra. Nanomboka drafitra fiverenana i Amazon.
Apple hanokatra Apple Store vaovao ao amin'ny faritra Brooklyn
Ny Apple Store farany izay efa tadiavin'i Apple mpiasa dia ao Brooklyn, iray amin'ireo tanàna be mponina indrindra any Etazonia.
Ny MacBook Pros vaovao dia hampiditra ny efijery Touch ID sy ny OLED
Araka ny voalazan'ny mpandalina KGI, Apple dia hanolotra amin'ny WWDC 2016 ny maodely MacBoom Peo vaovao miaraka amin'ny Touch ID, efijery OLED ary endrika vaovao.
Ireo mpivarotra OLED dia miomana amin'ny baiko quadruple alohan'ny iPhone 2017
Toa ny taona 2017 no ho taona: manantena baiko quadruple amin'ny taona ho avy ny mpivarotra fampisehoana OLED, ary toa ny iPhone no tompon'antoka.
Nanaitra anay ny WhatsApp tamin'ny alàlan'ny "Bugfixes" iray hafa amin'ity herinandro ity
Manamboatra bug indray? Marina izany, miafina indray ny tsiambaratelo manoloana ny fampiharana fandefasan-kafatra malaza indrindra eny an-tsena, WhatsApp.
Niaiky i Tim Cook fa lafo loatra ilay iPhone
Fantatr'i Tim Cook izany, ary na dia izy aza dia niaiky fa lafo be ny iPhone. Inona no tiany holazaina tamin'izany?
Apple dia mila iPhone 80 tapitrisa efa ho 7 tapitrisa vita amin'ny faran'ny taona
Andro eny, andro dia asehonay anao ihany koa ny fandikana, sary, sary, kisary ... manamafy fa izy ireo no iPhone manaraka 7. Tonga izany ...
Androany ao amin'ny Actualidad iPhone dia holazainay aminao ny zava-miafina ao ambadiky ny zoro boribory ao amin'ny iOS. Iray amin'ireo fialamboly marobe an'i Steve Jobs.
Famintinana isan-kerinandro vaovao izay ampisehoanay aminao ny vaovao mifandraika amin'ny iPhone 7 manaraka ary koa ny vaovao izay ho entin'ny kinova OS X manaraka
OS X 10.12 dia hamela anao hamaha ny Mac amin'ny alalàn'ny ID an'ny Touch an'ny iPhone
Ny tsaho farany mifandraika amin'ny OS X 10.12 dia milaza fa ity kinova ity dia azo vohana amin'ny Touch ID an'ny iPhone
Mampahatsiahy ireo mpamorona ny fahafatesan'i iAd i Apple
Apple dia nandefa mailaka vaovao ho an'ireo mpamorona mampahatsiahy ny serivisy iAd an'ny orinasa Cupertino izay hijanona.
Omaly dia nankalaza ny 15 taona tamin'ny Apple Stores voalohany
Omaly 19 Mey dia 15 taona taorian'ny nanokafana ireo Apple Stores roa voalohany tany Etazonia
I Brezila no firenena lafo indrindra mividy iPhone, Etazonia no mora vidy indrindra
Deutsche Bank dia namoaka fanadihadiana izay ahitantsika ny vidin'ny iPhone amin'ny maodeliny 16 GB any amin'ny firenena 28, Brezila no lafo indrindra amin'ny rehetra.
Apple hanokatra magazay vaovao 3 any India amin'ny faran'ny 2017
Tamin'ny dian'ny fitsidihana farany nataon'i Tim Cook tany India dia nahazo loharanom-baovao marobe izahay, anisan'izany ny fisokafan'ireo magazay telo vaovao eto amin'ny firenena.
Fitbit handefa modely vaovao miaraka amin'ny chip NFC
Fitbit dia nanambara ny fividianana Coin, orinasa natokana amin'ny fivarotana karatra miaraka amin'ny chip NFC, chip iray izay hampidiriny ao anaty tarika miisa.
Apple koa te-hanitatra ny Apple Store amin'ny 5th Avenue
Apple dia efa mikasa ny fanitarana ny Apple Store amin'ny làlambe faha-5, mba hanararaotana ny iray amin'ireo fitahirizam-bokatra manerantany lehibe indrindra.
Apple dia manova ny ora tokony hampiasantsika ny kaody amin'ny fitaovana miaraka amin'ny Touch ID
Tsy haiko raha nahatsikaritra ianao, fa hatramin'ny iOS 9.3 dia mila mampiasa ny kaody fiarovana imbetsaka amin'ny fitaovana miaraka amin'ny Touch ID isika. Lazainay aminao ny antony.
Ny Apple Pencil dia azo ampiasaina amin'ny Apple Trackpad ihany koa
Apple dia efa mieritreritra ny hanambatra ny Apple Pencil sy ny TrackPad an'ireo fitaovana hanoloana ireo takelaka sary, araka ny patanty iray tamin'ny taona 2014.
Apple hanokatra ivon-toerana Developer iOS ao Bangalore
Ny drafitra ho avy Apple an'ny India any India dia ny hamorona ivon-toerana ho an'ireo mpamorona ao Bangalore, handrisihana ny famoronana fampiharana ao amin'ny firenena
Nahazo vahana tany Etazonia ny Apple TV
Ny anjaran'ny Apple TV any Etazonia ankehitriny dia 20%, laharana fahefatra ambadiky ny Google, Roku ary Amazon.
Apple Pay dia mitombo hatrany, any Espana dia manohy miandry izahay
Apple Pay, angamba no lohahevitra tsy tiako lazaina indrindra amin'ny mpamaky anay, mazava ho azy ny antony, ...
Ny WhatsApp dia havaozina indray miaraka amin'ny "bug fixes" izay tsy
Hanana vaovao miafina ve isika? Andao hojerentsika izany, satria mahita vaovao isika. Ny antso an-tsary sy ny bokotra vaovao no manamboatra ny bug.
Intel dia hanome 50% ny chip LTE an'ny iPhone 7
Araka ny tsaho farany avy any Shina, Intel dia mety ho mpanamboatra ny chip LTE vaovao an'ny iPhone vaovao
Ny iPhone 7 dia mety ho tonga any aoriana noho ny fanamboarana sarotra
Ny iPhone 7 dia mety maharitra ela kokoa noho ny ilaina satria ny fanamboarana sarotra sy ny fivoriany dia mety hanemotra ny kaomandy ampy handrakofana ny tahiry.
Eny, afaka mahazo radio FM ny iPhone-nao
Kanada sy Etazonia dia mitaky an'i Apple hamela ny fandraisana ireo onjam-peon'ny radio FM ho fampitaovana amin'ny toe-javatra maika.
Fitbit no mpivarotra tsara indrindra eo amin'ny tsenan'ny akanjo
Amin'ny tontolon'ny akanjo anaovana akanjo, Fitbit no mbola mpanjaka, arahin'i Xiaomi sy Apple Watch ho toy ny smartwatch voalohany ao amin'ilay lisitra
Leo amin'ny Apple sy ny fenitra avo roa heny ao amin'ny App Store
Tsy ny habetsaky ny iOS App Store ihany no nitombo tsy misy dikany, fa ny kalitao kosa nampihena be.
Handeha any India i Tim Cook hanomboka ny fanitarana azy ao amin'ny firenena
Talohan'ny faran'ity volana ity dia mikasa ny handeha ho any India i Tim Cook, hihaona amin'ny praiminisitra ary hanafainganana ny fanokafana ny fivarotany manokana.
Rohy fampidinana IOS 9.3.2
Atolotray anao ny rohy fampidinana ho an'ny iOS 9.3.2, ny kinova farany an'ny iOS 9 izay natombok'i Apple ora vitsy lasa izay.
Google dia nihoatra ny Apple (ary Apple indray Google) ho orinasa sarobidy indrindra manerantany
Google dia nihoatra ny Apple indray no orinasa manandanja indrindra eto an-tany noho ny fidinan'ny vidiny tao anatin'ny herinandro vitsivitsy
Samsung dia nanisy pataloha smartwatch iray izay mamadika ny tanantsika ho amin'ny efijery
Samsung dia vao avy nanoratra fotokevitra smartwatch iray tany Etazonia izay misy projet iray hanitarana ny efijery eo am-pelatanantsika
Taylor Swift dia kintana amin'ny doka Apple Music vaovao
Apple Music dia namoaka doka vaovao miaraka amin'i Taylor Swift indray, izay nandihizany tamin'ilay hira hoe Minoa Fitiavana antsoina hoe Thing Called Love
Mpamatsy vola lehibe iray hafa no mivarotra ny anjarany Apple
Mpamatsy vola lehibe iray hafa ao amin'ny orinasa, David Tepper, no nivarotra ny anjarany rehetra tao amin'ilay orinasa monina any Cupertino.
Manomboka ny famerenana amin'ny laoniny i Sharp taorian'ny nahazoany an'i Foxconn
Ny ankamaroan'ny fitarihana mivantana an'i Sharp dia hanjavona amin'ny volana Jona amin'ity taona ity, soloin'ireo mpiasa sy mpitantana Foxconn.
Mihena hatrany ny Apple hampahafantatra antsika ny kinova vaovao an'ny iOS 10 amin'ny Conference Conference izay hanomboka amin'ny 13 Jona.
Google dia mandefa fampiharana hanaraka ny kaonferansa ho an'ny mpamorona amin'ny iOS
Google dia nanangana fampiharana iray mba hahafahan'ny mpampiasa iOS rehetra manaraka amin'ny fotoana rehetra ny zava-mitranga ao amin'ny Conf. Mba hampivelarana
Apple dia manangona vola 1.000 XNUMXM any Didi, ilay Sinoa Uber
Iray amin'ireo tsena lehibe indrindra ho an'ny Apple ny China ary angamba, ao an-tsaina izany dia namatsy ny vola 1.000M tao Didi.
Aviary dia havaozina ho an'ny iOS miaraka amin'ny vaovao mahaliana
Aviary mamela anao hanova sary amin'ny fomba mora sy haingana indrindra amin'ny fitaovana iOS rehetra, dia havaozina amin'ny vaovao izany.
iOS 9 dia mijanona amin'ny fananganana azy tahaka ny varotra
Ny data vaovao nomen'i Apple momba ny fananganana ny iOS 9 dia mampiseho amintsika fa ny quota dia mijanona ho roa herinandro lasa izay.
Ny iPhone dia very hatrany hatrany; Miakatra mihoatra ny taloha ny Android
Mitohy ny vaovao ratsy ho an'i Apple: mihombo hatrany ny fanevatevana ny fanjakan'ny Android. Tonga ve ny andro izay mampiseho fa voaozona i Apple?
YouTube Messenger, miditra amin'ny fandefasana hafatra eo noho eo i YouTube
YouTube Messenger, tafiditra ao amin'ny fampiharana YouTube ho serivisy fandefasan-kafatra hafatra haingana hiresahana amin'ireo namantsika.
Nambaran'ireo mpamorona fa tsy mihoatra ny 24 ora ny fizotran'ny fampiharana
Araka ny filazan'ny mpamorona sasany, ny fizotry ny fizahana ny fampiharana alohan'ny hahatongavany amin'ny App Store dia nahena ho 24 ora
Nolavin'i Apple ny tsaho momba ny fikatonan'ny iTunes tao anatin'ny roa taona
Toa mikasa ny hampidina ny jamban'ny iTunes tokoa i Apple, noho ny fihenan'ny varotra izay efa niainan'i iTunes tao anatin'izay taona maro izay
Nandefa fotoana fohy tany Eoropa sy Kanada i Facebook, tsy misy fankasitrahana amin'ny tarehy
Nanambara i Facebook androany fa hitondra ny sehatra Moments ho any Eropa sy Kanada ihany izy amin'ny farany, na dia tsy manana fahaiza-manao amin'ny endrika ivelany aza.
Ny fihinanana amin'ny lavanty Tim Cook dia mifarana amin'ny $ 515.000
Ny varotra varotra farany niarahan'ny Tim Cook niara-niasa dia nahavita nanangona $ 515.000 izay ho any amin'ny fikambanana Charitybuzz
WhatsApp dia mandefa ny fampiharana ofisialy ho an'ny Windows sy Mac OS
Lazainay aminao ny fomba fampidinana haingana ny rindranasa WhatsApp ho an'ny PC sy macOS haingana ary inona ny vaovao ampidirin'ity mpanjifa ofisialy ity.
Apple Manomboka Mampandre ny mpandresy vatsim-pianarana WWDC 2016
Apple dia efa nanomboka nampandre ireo mpandresy tamin'ny vatsim-pianarana WWDC 2016, loka mitentina $ 1.500 mahery.
Spotify manafaingana ny fitomboany amin'ny fahatongavan'i Apple Music
Ny fitomboan'ny Spotify dia haingana kokoa taorian'ny nahatongavan'ny Appel Music, lavitra ny miharatsy kokoa noho izy ireo manana mpampiasa betsaka kokoa noho ny hatramin'izay.
Ny rakikira vaovao nataon'i Drake dia amidy 1 tapitrisa kopia ao anatin'ny herinandro
Ny rakikira farany nataon'i Drake, izay nivoaka herinandro monja talohan'izay tao amin'ny Apple Music sy iTunes, dia namidy firaketana an-tapitrisany tao anatin'ny 5 andro monja
Swift 3.0 ho avy amin'ity taona ity ary tsy hifanaraka amin'ny Swift 2.2
Apple dia nanambara fa ny Swift 3.0 dia ho tonga amin'ity taona ity ho fanavaozana lehibe, saingy hanana ny tsy fitoviana amin'ny Swift 2.2.
Avoahy hiala ny garazy i Tesla amin'ny alàlan'ny Siri amin'ny Apple Watch
Misaotra ny mpamorona iray, azo atao izao ny mamoaka ny Tesla hiala ao amin'ny garazy mampiasa azy Siri avy hatrany amin'ny alàlan'ny Apple Watch.
Apple dia manakarama injeniera Google teo aloha izay manana traikefa amin'ny fiara elektrika
Apple dia nanakarama tamin'ny volana jolay tamin'ny taon-dasa ny injeniera iray izay niasa tao amin'ny Google ary misy ifandraisany amin'ny fitehirizana angovo ho an'ny fiara
Apple dia mivory amin'ny podcaster maromaro handrenesana ny ahiahin'izy ireo
Ireo podcastera lehibe 7 dia tonga tao amin'ny tranokala Cupertino mba hanao fivoriana sy haneho ny fitarainany momba ny serivisy natolotry Apple
Ho tonga ny iOS 10 miaraka amin'ny fampiharana HomeKit toy ny mahazatra
Hanome anao ny tsindry farany i Apple, satria amin'ny iOS 10 dia ho hitantsika ny HomeKit ho fampiharana efa napetraka mialoha.
Milaza ny minisitry ny fifandraisan-davitra Indiana fa mora ny Hack ny iPhone
Vao nanambara ny minisitry ny serasera ao India fa miahiahy momba ny encryption ho an'ny maodelin'ny iPhone izahay satria azonao idirana izany isaky ny tianao
Bob Kupbens, filoha lefitry ny Apple Store amin'ny Internet no nandao ilay orinasa
Ny filoha lefitry ny Apple Online Store dia nandao ny orinasa tamin'ny herinandro lasa teo, toa tsy nahatratra ny tanjona napetraka taminy.
Ireo zanakalahin'i Silicon Valley dia mitady faritra midadasika hahafahany mampiroborobo ireo fiara mahaleo tena manaraka
Ireo lehibe ao amin'ny Silicon Valley dia mitady faritra midadasika hampivelarana ireo fiara mahaleo tena manaraka izay hidona amin'ny tsena atsy ho atsy.
Tim Cook hitsidika an'i Sina hihaona amin'ny governemanta
Araka ny fanontana Reuters dia mikasa ny hitsidika an'i Shina i Tim Cook hihaona amin'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny firenena ary hiezaka hamaha olana sasany.
Star Wars: Knights of the Old Republic amidy mandritra ny fotoana voafetra
Stars Wars: Knight of the Old Republic dia nampidina ny vidiny tamin'ny fomba voafetra ary raha tokony handoa 9,99 euro isika dia afaka mividy azy amin'ny 2,99 euro
Great Theft Auto: tantara Liberty City sy San Andreas amidy mandritra ny fotoana voafetra
Great Theft Auto: ny tantara Liberty City dia nampidina ny vidiny nandritra ny fotoana voafetra. Raha liana amin'ilay lalao ianao dia araraoty ilay tolotra ary arotsahy 4 euro ny tenanao.
Hatramin'ny volana jona dia ny IPv6 ihany no tsy maintsy tohanana ny rindranasa rehetra
Hatramin'ny 1 Jona, ny rindranasa rehetra nakarina tao amin'ny App Store dia tsy maintsy misy ny fanohanan'ny IPv6. Raha mampiasa IPv4 izy ireo dia mila manova ny kaody.
Ny polisy Los Angeles mamoha iPhone 5s
Nahavita nanokatra ny iPhone 5 an'ny vadin'ny mpilalao Michael Jace, avy amin'ny andiany The Shield, ny sampan'ny polisy ao Los Angeles
YouTube dia manomana ny serivisy fahitalavitra an-tserasera ihany koa
Google avy amin'ny YouTube dia mikasa ny handefa fahitalavitra amin'ny alàlan'ny streaming amin'ny alàlan'ny famandrihana karama, toa ny Hulu na ny serivisy Apple ho avy.
Apple manala ny iray amin'ireo tetik'asa tian'i Steve Jobs
Mampatsiahy ny NeXT antsoina hoe WebObjets, rindranasa sy tontolo iainana fampiharana any Java izay nanapa-kevitra ny handevina ny Apple.
Zazalahy iray 10 taona no nahita fahalemena tao amin'ny Instagram
Ny olana farany momba ny fiarovana Instagram dia hitan'ny zaza vao herotrerony 10 taona ary nahazo valisoa 10.000 $.
Facebook Messenger te-ho tonga Snapchat
Ireo tovolahy avy amin'ny Facebook dia toa manandrana fiasa vaovao amin'ny rindranasa Messenger izay ahafahanao mamafa hafatra mandeha ho azy
Yoky Matsuoka, mpiara-manorina ny Google X ary manam-pahaizana momba ny robotika, dia miditra amin'ny ekipa Apple
Apple dia nanakarama manam-pahaizana momba ny robotika ary mpiara-manorina an'i Google X Yoky Matsuoka. Amin'ny voalohany dia hiasa amin'ny sehatry ny fahasalaman'i Apple izy io
Apple dia namoy ny zony manokana hampiasa ny marika iPhone any Shina
Apple dia namoy ny exclusivité fotsiny afaka nampiasa ny mari-pamantarana iPhone any Shina, satria orinasa iray hafa no nanoratra azy io teo aloha.
Ny iPhone no fitaovana mitaona indrindra amin'ny fotoana rehetra
Vao haingana izahay no niresaka momba an'i Tim Cook, ny CEO an'ny Apple, notendrena ho iray amin'ireo olona manan-kery XNUMX ...
Araka ity patanty ity, ny Apple Pencil 2 dia mety hanana Touch ID sy loha vaovao azo ovaina
Araka ny patanty iray napetraka tamin'ny 2011 ary nomena omaly, ny Apple Pencil 2 dia mety hanana loha azo soloina sy Touch ID.
Ivotoerana indroa miisa roapolo hafa tonga ao amin'ny Apple Pay
Andrim-pianakaviana indroa miisa roapolo no nanatevin-daharana ny sehatry ny fandoavam-bola any Apple, fantatra amin'ny anarana hoe Apple Pay.
Nintendo dia manazava ny antony itondrana ny Animal Crossing fa tsy i Mario amin'ny sehatra finday
Taorian'ny fihaonambe izay nanambaran'ny Nintendo ny valim-bola, ny filohan'ny orinasa dia nanamarina ny safidin'ny lalao vaovao ho avy
LG dia mahavita manampy sensor eo amin'ny efijery amin'ny efijery
Ny orinasan-tserasera koreana LG dia nanolotra efijery iray izay mampiditra sensor ho an'ny dian-tànana mifangaro izay 0,03 milimetatra fotsiny ny hateviny.
Deadpool dia nanangana ny fivarotana iTunes iTunes Store
Ireo tovolahy avy ao amin'ny iTunes Store Amerikana Avaratra dia mandefa fanentanana tsara ao amin'ny iTunes Store mampiroborobo ny sarimihetsika Deadpool vaovao.
Tim Cook: "handefa zavatra izahay fa tsy hanazava amin'ny tenanao ny fomba niainanao raha tsy nisy azy ireo"
Tamin'ny resadresaka nifanaovana omaly tao amin'ny Mad Money dia nilaza i Tim Cook fa manana teknolojia voaomana izy ireo raha tsy izany dia tsy ho azontsika ny fomba ahafahantsika miaina mandraka ankehitriny.
Tsy mamela ny Apple hivarotra fitaovana nohavaozina ny governemanta Indiana
Apple dia nanandrana nanolotra tolotra mampidi-doza hivarotra finday nohamboarina any India, zavatra izay tsy tian'ny governemanta India.
eBay dia hamoaka fanavaozana misy fampiasa vaovao maro atsy ho atsy
Avy amin'ny eBay dia manavao tsy tapaka ny fangatahany hanolotra serivisy tsaratsara kokoa izy ireo, toy ny tranga farany izao.
Apple dia mandefa fanambarana vaovao amin'ny Fetin'ny Reny
Apple dia nanangana doka vaovao hankalazana ny Fetin'ny Reny, andro iray izay ankalazaina mandritra ny volana Mey any amin'ny firenena maro amin'ny daty samihafa
Apple dia manakarama ny mpanatanteraka BOX teo aloha
Amin'ny fiezahany hanatsara hatrany ny serivisy omen'ny orinasa dia manandrana mihazona ny ...
Ny mpanazatra mafy orina dia handefa tady isan-karazany ho an'ny Apple Watch
Ny orinasan-tsambo amerikana Coach no mpamorona lamaody faharoa nanatevin-daharana an'i Apple nanangana fanangonana tady ho an'ny Apple Watch
WhatsApp dia miasa amin'ny fampiharana ho an'ny Windows sy Mac
Toa hitan'ireo tovolahy avy amin'ny WhatsApp fa izy ireo no hany fampiharana fandefasan-kafatra izay tsy manana fampiharana ofisialy ho an'ny Windows sy Mac
Isaky ny tonga ny Alahady avy amin'ny Actualidad iPhone dia manandrana mamintina ireo vaovao rehetra manan-danja indrindra amin'ny herinandro amin'ny lahatsoratra iray izahay
Apple manamboatra ny tranokala ho an'ny fanohanana ara-teknika
Vao avy nanamboatra ny tranokala natokana ho an'ny Teknolojika Support amin'ny vokatra rehetra i Apple, ary mampifanaraka izany amin'ireo magazay vaovao
Fiat Chrysler dia manavao ny ivon-haino aman-jery fiaran'ny fiara taloha mba hifanaraka amin'ny Siri Eyes Free
Ny vondrona FCA dia namoaka fanavaozana ny lozisialy multimedia an'ny fiarany 2013-2015 hampifanaraka azy amin'ny Siri Eyes Free
Na eo aza ny lazain'i Schiller dia diso ihany koa i Apple
Ilay resabe navoakan'ny bitsika nataon'i Phill Schiller dia mitarika antsika any amin'i Apple, izay manodinkodina ny volan'ny vokariny ihany koa.
Apple dia manome lesona amin'ny fiteny hilazana ny vokatr'izy ireo
Phil Schiller, filoha lefitry ny Marketing an'ny Apple, dia tsy faly satria namotika ny fitaovana Apple ny mpampiasa sy ny media
Ny FBI dia nandoa $ 1 farafaharatsiny mba hamohana ny iPhone an'i San Bernardino
Niresaka momba ny vidin'ny FBI izahay raha hanokatra ny iPhone tsy misy fangarony, ary raha ny fivoahana farany farany dia mety ho iray tapitrisa dolara izany.
Carl Icahn dia mivarotra ny anjarany Apple rehetra
Carl Ichan, iray amin'ireo tompon'andraikitra ambony ao amin'ny Apple, dia nanambara fa efa namidiny ireo anjara rehetra azony tao amin'ilay orinasa
Steve - The Jumping Dinosaur, lalao fampandrenesana foibe
Steve - The Dinosaur Jumping dia hamela antsika hilalao mivantana avy amin'ny Notification Center an'ireo fitaovan'ny iOS.
Efa misy amin'ny fomba ofisialy izao ny sehatra Apple CareKit
Apple dia efa nandefa ny rafitra CareKit, sehatra ara-pahasalamana hanarahana, hitantana ary hampandre momba ny fanovana ara-pahasalamana.
Lahatsary voalohany ao afovoan'ny Apple Campus 2 vaovao
Anio dia asehonay aminao ny horonan-tsary vaovao roa an'ny Campus 2 an'ny Apple, fa tamin'ity indray mitoraka ity dia voarakitra ao anaty ny vala.
Mpiasa Apple iray no hita faty tao amin'ny efitrano fihaonamben'ireo biraon'ny Apple
Omaly maraina, tamin'ny 8 ora 35 maraina Cupertino, mpiasa Apple no hita faty tao anaty efitrano iray ...
Ahoana ny fomba ahodinanao ny lahatahanao (Tsy misy ny jailbreak)
Atorinay anao ny fomba fanovana ny fisehoan'ny lahatahiry ao amin'ny iOS 9 manomboka amin'ny kianja ka hatramin'ny fihodinana tsy misy jailbreak na fahasarotana, amin'ny fomba azo ahodina sy azo antoka.
Hearthstone dia mampihetsika ny fanitarana vaovao, Whisper of the Old Gods
Mangovita amin'ireo fiasa vaovao natolotry ny fanitarana vaovao sy ny patch 5.0 amin'ny lalao karatra malaza, Hearthstone. Inona ny hevitrao?
Raha ny filazan'i Apple, ny fangatahana iPhone SE dia mihoatra ny andrasana
Nandritra ny fihaonamben'ny vola niditra vao nambaran'i Apple dia nilaza i Tim Cook fa ny fangatahana ny iPhone SE dia mihoatra ny vinavinan'ny vinavina
Apple dia mahatratra 13 tapitrisa ny mpanjifa ao amin'ny Apple Music
Hatramin'ny nanombohany ny faran'ny volana jolay tamin'ny taon-dasa, ny orinasa monina ao Cupertino dia nanangona mpanjifa 13 tapitrisa ho an'ny Apple Music.
Ny varotra IPhone dia voalohany indrindra hatramin'ny nanombohany
Raha ny tarehimarika farany natolotry ny orinasa dia nihena be ny varotra iPhone raha oharina amin'ny Q tamin'ny taon-dasa
Noteren'ny governemanta Indiana i Apple hanisy bokotra hikorontana amin'ny iPhones manomboka amin'ny 2017
Vao namoaka lalàna vaovao ny governemanta Indiana izay hanerena ny mpanamboatra finday avo lenta rehetra hampiditra bokotra mikorontana
Neil Patrick Harris manatevin-daharana ny doka nataon'i Apple
Apple dia nanakarama an'i Neil Patrick Harris tamin'ny dokam-barotra roa farany vitany, taorian'ny fanentanana tamin'ny doka lohataona haingana.
Ny programa iPhone Upgrade ankehitriny dia hita ao amin'ny Apple Store
Ary farany, ny Programme Upgrade iPhone dia tonga tao amin'ny Apple Store Online ihany androany tany Etazonia.
Te hihinana miaraka amin'i Tim Cook ve ianao? Tsy maintsy manolotra $ 110.000 mahery ianao
110.000 XNUMX $ no vidin'ny fiaraha-misakafo miaraka amin'i Tim Cook dieny izao, saingy azo antoka fa hitombo izy io. Afaka mandao ahy ve ianao?
Tokony handoa hetra bebe kokoa i Wozniak Apple
Wozniak dia nanolotra tafatafa iray tamin'ny BBC izay nanamafisany fa tokony handoa hetra bebe kokoa noho ny fandoavana azy i Apple ankehitriny.
Beyoncé dia mamoaka ny rakipeony vaovao Lemonade manokana ao amin'ny Tidal
Beyonce dia namoaka ny rakikirany farany, antsoina hoe Lemonade, ao amin'ny Tidal fotsiny, ary tsy ho ela dia tokony hiditra amin'ny Apple Music afaka ora vitsivitsy.
Sintomy ny sary miaina WWDC 2016
Raha tianao ny sary fototra izay atolotry ny Apple isan-taona. avelanay ho anao ny WWDC 2016 manaraka
Mikatona ny fivarotana sarimihetsika sy boky an'i Apple any Shina
Noterena hanidy ny sarimihetsika iTunes sy iBook any China i Apple, noho ny fanadihadiana nataon'ny governemanta ao amin'ny firenena
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, Siri tamin'ny fangatahan'ny mpampiasa dia nampahafantatra anay ny daty izay ...
Apple dia mampihena ny vidin'ny iPhone any Japon 10%
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia nampidina ny vidin'ny iPhone sy iPad hatramin'ny 10%, noho ny fanitsiana ny fiovaovan'ny dolara.
Ireo no Apple Stores izay hosokafan'i Apple raha ny tsiliantsofina re
Hanao famerenana momba ny Apple Stores izay efa honohono tato anatin'ny volana vitsivitsy isika na dia tsy nohamafisin'i Apple tamin'ny fomba ofisialy aza izy ireo.
Tapitra ny fe-potoana fividianana tapakila ho an'ny WWDC 2016
Tapitra ny varotra tapakila ho an'ny WWDC 2016. Ny alatsinainy ho avy izao dia hisy ny raffle amin'ireo mpampiasa rehetra izay nividy azy ireo
Apple dia nampiakatra ny vidin'ny iPhone 6 sy 6s hatramin'ny 29% any India
Apple, na inona na inona mety hitranga, dia nampiakatra ny vidin'ny iPhone 6 sy 6s fotsiny hanandrana hanalavitra ny vidin'ny iPhone SE ary hampirisika ny varotra
Apple dia mampihena ny vidin'ny iPhone SE, 6s ary 6 any Japon amin'ny 10%
Vao avy nanambara fihenam-bidy 10% i Apple amin'ny maodely iPhone rehetra amidiny ao amin'ny firenena: iPhone SE, 6, 6 Plus, 6s ary 6s Plus
Tim Cook indray eo amin'ireo olona manan-kery 100 eran-tany
Nandritra ny taona iray hafa, ny magazine Time dia nampiditra an'i Tim Cook ho iray amin'ireo olona manan-kery 100 eran'izao tontolo izao ankehitriny.
Apple Touts iMessage sy angovo azo havaozina amin'ny doka vaovao
Apple dia namoaka horonantsary vaovao hanohizana ny fankalazana ny Andron'ny Tany, izay hatao ny 24 aprily.
Fampihainoana an-tsarimihetsika Apple miaraka amina fifandraisana Bluetooth sy tariby
Betsaka ny tsaho miely tato anatin'ny volana vitsivitsy izay nanambarana fa saika azo inoana, ...
Mihevitra ny mpandinika fa handingana ny iPhone 7s i Apple; handefa iPhone 8 tsy misy bokotra an-trano
Tsy mbola navotsotra ny iPhone 7 ary efa noresahina ny manaraka: ny mpandinika iray mino fa hotsipahin'izy ireo ny iPhone 7 ary alefany mivantana ny 8.
Reserve Strap, ny tadin'ny bateria ho an'ny Apple Watch, dia manafoana ny fandefasana anao
Reserve Strap, manolotra bateria fanampiny ho an'ny Apple Watch, najanon'izy ireo fotsiny ny fandefasana rehetra hatramin'ny nijanonany tamin'ny asany.
Roa volana mankany amin'ny iOS 10 beta, fanantenana lehibe izany
Afaka herinandro vitsivitsy miala ny WWDC 16 isika ary hiara-hiasa amin'ny rafitra fiasa vaovao iOS 10, manantena mafy izany izahay.
Apple dia manova ny andro hanehoany ny fandanjalanjany manomboka ny 25 ka hatramin'ny 26 aprily
Ho fanajana an'i Bill Campbell, saingy nanova ny daty hanolorany ny taratasy fifandanjana i Apple sy ny 25 aprily ka hatramin'ny faha-26.
FreedomPop, antso maimaim-poana sy data, mahavariana fa marina
FreedomPop dia ho tonga any Espana amin'ity fahavaratra ity miaraka amin'ireo tambajotram-telefaona fototra maimaim-poana ho an'izao tontolo izao, 200 minitra, 200 MB ary hafatra 200.
iOS 9.3.2 Beta 2 dia mamela antsika hiara-hientana amin'ny Night Shift sy ny Mode Power Low miaraka
Ao amin'ny beta farany izay navoakan'ny Apple ho an'ny mpamorona, ny Night Shift ary ny fomba fitehirizana bateria dia azo alefa miaraka
Apple dia miasa amin'ny kinova web an'ny Apple TV apps
Araka ny hitantsika amin'ny sary izay mitarika ity lahatsoratra ity, Apple dia miasa amin'ny kinova iTunes an'ny Apple TV
Apple dia mety miasa amin'ny fampiharana tranokala Apple Maps
Araka ny tsaho farany, Apple dia afaka manolotra kinova web an'ny Apple Maps izay azon'ny mpamorona ampidirina amina tranonkala hafa.
Freedom POP, ny internet MAIMAIMPOANA na aiza na aiza dia tonga any Espana ihany!
Tonga any Espana ny Freedom POP hiara-hiasa amin'ireo efa niorina, mivonona hanana antso, data ary sms MAIMAIMPOANA avy amin'ny toerana rehetra eran'izao tontolo izao!
Nahazo avo roa heny ny vola miditra amin'ny Play Store ny App Store na dia vitsy aza ny fampidinana
Ny antontan'isa vaovao momba ny fidiram-bola avy amin'ny magazay Apple sy Android dia mampiseho amintsika fa ny Apple Store dia mamokatra avo roa heny amin'ny vola miditra amin'ny Play Store.
Raha ny fantatra dia nangataka tamin'i Apple ny kaody loharano an'ny iOS i Shina, saingy ny olona Cupertino dia nandà tsy hitovy amin'ny ataon'izy ireo amin'i Etazonia.
Apple Renew dia mamela ny tompon'ny vokatra Apple hamerina hamerina ny fitaovana taloha rehefa mividy zava-baovao.
Banky vaovao 50 any Etazonia izao no manohana ny Apple Pay
Vao avy nanavao ny lisitry ny banky sy ny andrim-panjakana mpampindram-bola mifanaraka amin'ny Apple Pay i Apple, iray andro taorian'ny niantsorohany tany Singapore
Fantatr'i Apple hoe impiry isika no mamoha ny iPhone isan'andro
Mpitantana orinasa maro no nanao fampahalalana imasom-bahoaka maro mifandraika amin'ny fampiasan'ny mpampiasa ny iPhone.
Nodimandry i Bill Campbell, iray amin'ireo mpampianatra an'i Steve Jobs, Larry Page ary Jeff Bezos
Araka ny famoahana Re / code, iray amin'ireo sary masina ao amin'ny Silicon Valley ary mpikambana taloha tao amin'ny staff an'i Apple,…
Mijanona amin'ny sonia ny iOS 9.3 i Apple
Vao nijanona tsy nanao sonia ny iOS 9.3 i Apple, ka raha manana olana amin'ny fitaovanao ianao ary mila mamerina azy io dia tsy afaka manao izany amin'ny iOS 9.3.1 fotsiny ianao
Apple dia manamafy amin'ny fomba ofisialy ny datin'ny WWDC 2016 manaraka
Apple dia nanamafy tamin'ny fomba ofisialy ny vaovao fa efa nanambara i Siri ora maro talohan'izay raha nanontaniana momba ny daty kasaina WWDC izy
Yousician, ny fampiharana amin'ny iPhone izay mampianatra ahy hitendry piano (ary amin'ny ho avy ny gitara sy ukulele)
Yousician dia fampiharana ho an'ny iPhone, iPad, Android, Mac na PC izay ahafahanao mianatra mitendry piano, bass, gitara na ukulele.
Orinasa Sony roa manakana ny famokarana noho ny horohoron-tany; mety hisy fiantraikany amin'ny iPhone
Ny horohoron-tany tany Japon dia nisy fiatraikany amin'ny orinasa Sony roa izay anaovana lantana iPhone, saingy hisy fiantraikany amin'ny famokarany ve izany?
WWDC dia hirotsaka amin'ny 13-17 Jona, hoy i Siri
Rahoviana no hisy ny WWDC 2016? Manantena isika rehetra fa amin'ny volana Jona, saingy mbola tsy misy voamarina. Na ahoana na ahoana, Siri dia manome torolàlana ho antsika.
Araka ny voalazan'i Apple, izy no orinasa mahomby indrindra eto amin'izao tontolo izao amin'ny filaminana
Tamin'ny resadresaka nifanaovana vao haingana dia nilaza ireo injenieran'ny orinasa fa Apple no orinasa manana rindrambaiko azo antoka indrindra eto an-tany.
iOS 9.3.1 vs iOS 9.2.1: Fitsapana fampisehoana sy androm-piainana
Isaky ny mamoaka kinova iOS vaovao i Apple, na beta na tsimbadika farany, ry zalahy ao amin'ny iAppleBytes…
Apple mandà ny hamoha iPhone 5s voarohirohy amin'ny raharaha rongony
Apple dia mbola mandà ny fanampiana ny Departemantan'ny Fitsarana mifandraika amin'ny tranga iPhone 5 iray voarohirohy tamin'ny fanondranana zava-mahadomelina.
Ny vola miditra ao amin'ny Clash Royale dia manodidina ny trillion dolara
Nahazo vola 80 tapitrisa dolara i Supercell vao namoaka ilay lalao paikadiny vaovao "Clash Royale." Tsy hita ao amin'io isa io ny 30% nomeny an'i Apple sy Google.
Ny fanodinana IPhone dia harena ankibon'ny tany ho an'i Apple
Apple mizara ny habetsaky ny fitaovana azo averina amin'ny laoniny ny iPhone, izay mifanaraka amin'ny fandraisana an-tanana ny fanodinana azy amin'ny maha orinasa azy.
Fivarotana Apple Mankalaza ny Andron'ny Tany amin'ny fanovana ny lokon'ny Logo
Amin'ny 22 aprily, ankalazaina ny Andro eto an-tany ary ho porofon'ny fanoloran-tenan'i Apple ...
Ny URL voafintina dia tsy azo antoka, fikarohana hita
Nandritra ny taona vitsivitsy, misy serivisy marobe manome antsika ny fahafahan'ny fandefasana URL fohy mba zaraina ...
MusicAll, mozika mivantana maimaim-poana rehetra amin'ny iPhone-nao
Musicall Black dia hamela antsika hihaino ny mozika tadiavintsika na aiza na aiza tadiavintsika amin'ny iPhone fa tsy mila mandoa vola na euro iray aza.
Samsung dia hanomboka hanome ny fampisehoana OLED amin'ny Apple amin'ny 2017
Toa ny farany iza no ho tompon'andraikitra amin'ny famokarana ny efijery OLED amin'ny iPhone ho avy dia Samsung, ary hanomboka amin'ny 2017 izany.
Ny loharanom-baovao akaiky an'i Apple dia nilaza fa ny bibikely rehetra dia efa raikitra avokoa
Ny loharanom-baovao akaiky an'i Apple dia nilaza fa ny bibikely voalohany sy ny bokotra vao haingana 1970 dia namboarina tamin'ny famoahana ny iOS 9.3.
Tandremo ny Apple, ireo marika lehibe ao Shina miomana hidina any Eropa
I Meizu no voalohany, ary izao i Xiaomi no manao ny dingana voalohany mankany Eropa, inona no hitranga? Ahoana no fiantraikan'izany amin'ny Apple? Midira ary fantaro.
Apple mandefa drafitra fanofana indiana ho an'ny iPhone SE
Apple dia nanangana drafitra fampanofana trano hanamafisana ny varotra ny fitaovana vaovao 4-inch.
Hevitra vaovao momba ny iOS 10
Mampiseho aminao hevitra vaovao momba ny iOS 10 izahay, hahitanay ny sasany amin'ireo fiasa nandrasan'ny mpampiasa maro tao amin'ny iOS.
Ny rakikira vaovao nataon'i Drake dia ho tonga herinandro mialoha amin'ny Apple Music
Ny rakikira vaovao nataon'i Drake dia ho hita herinandro mialoha amin'ny Apple Music fa tsy amin'ny serivisy mozika streaming hafa.
Apple dia manala ireo fampiharana Reddit an'ny antoko fahatelo amin'ny App Store ho an'ny safidy NSFW
Ny App Store dia nisotro fisotroan-dronono maro be izay mamela ny atiny NSFW haseho amin'ny alàlan'ny switch.
Top 10 amin'ireo finday avo lenta haingana indrindra amin'ny Q1 2016 araka ny AnTuTu
Ny lisitry ny smartphone 10 haingana navoaka hatreto tamin'ity taona ity dia notarihan'ny Xiaomi Mi, mamela ny iPhone 6s amin'ny toerana fahatelo.
Apple hampiasa mpizara sinoa hamindra ny serivisy iCloud
Araka ny DigiTimes, Apple dia mety saika hamindra ny fampahalalana avy amin'ny mpizara azy amin'ny orinasa Shinoa Inspur
Navoaka tamin'ny Portland ny mombamomba ny fitateram-bahoaka
Portland any Oregon no tanàna vaovao izay nampiana ho an'ny lisitry ny tanàna izay manome vaovao momba ny fitateram-bahoaka.
Skates Apple any India miaraka amin'ny iPhone SE
India dia iray amin'ireo tsena tadiavin'i Apple hitarika ny iPhone SE vaovao, saingy hatreto dia zara raha nivarotra singa vitsivitsy
Ny fangatahana iPhone SE any Etazonia dia mihoatra ny tahiry
Ny tinady ny iPhone SE any amin'ireo magazay any Etazonia dia mihoatra ny tahiry efa nandrasan'ny Apple ho an'ireo mpampiasa any amin'ny firenena amerikana.
Ireo mpamatsy Apple dia voarohirohy tamin'ny "Panama Documents"
Afaka nahita orinasa manome an'i Apple ao anatin'ny "antontan-taratasy Panama", toy ny Foxconn manan-danja indrindra.
Mbola tsy afaka mampiasa iPhone i Obama na dia efa afaka manao izany aza ny mpanolon-tsaina azy
Na eo aza ny zava-misy fa afaka mampiasa ny iPhone ny ankamaroan'ny mpanolo-tsain'i Barack Obama, dia mbola melohina ny filoha amerikana mampiasa Blackberry
Google dia handinika ny fampiasana Swift amin'ny Android
Google dia afaka nampihatra ny Swift tamin'ny Android, ilay fiteny fandaharana noforonin'i Apple. Inona no mety ho eritreretiny? Midira ary mizaha miaraka aminay ...
Tian'i Bernie Sanders i Apple hanamboatra any Etazonia ary handoa hetra bebe kokoa
Bernie Sanders, kandidà demokratika amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Etazonia, dia nitafa tamin'ny Daily ...
Apple dia manamboatra ny marefo amin'ny Siri sy Touch ID
Apple dia nanangana fanavaozana fanavaozana ireo rafitra misy azy mba hanitsiana ny fahalemen'ny toerana misy azy ao amin'ny Siri sy Touch ID.
Jim Lee avy amin'ny DC Comics dia mitaona an'i Batman miaraka amin'ny Apple Pencil
Mpiara-miasa amin'ny DC Comics izy amin'izao fotoana izao ary nasehony anay ny hatsaran'ny Apple Pencil ary amin'ny alàlan'ny fampiharana Procreate.
Rahampitso dia afaka milalao ny PlayStation 4 amin'ny Mac-nao ianao
Mandritra ny anio sy rahampitso dia amin'ny fotoana hanombohan'i Sony ity fanavaozana ny rafitra fiasa amin'ny PS4 ity izay ahafahan'ny Remote Play.
Apple Maps dia manampy fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka any Montreal
Ny Apple Maps dia nanampy an'i Montreal tao amin'ireo toerana izay manome fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka.
Apple Pay dia nanampy banky vaovao 32 tany Etazonia
Androany maraina dia nifoha tamin'ny vaovao izahay fa ny banky anglisy Barclays dia nanolotra fanohanana fotsiny ...
Apple Stores dia hanova harona plastika ho an'ny taratasy
Amin'ny 15 aprily, fivarotana Apple maro be no hanova harona plastika ho an'ny taratasy, manamafy ny fanoloran-tenan'i Apple amin'ny natiora
Maimaimpoana ny lalao manaraka an'i Gameloft
Nandritra ny fotoana vitsivitsy izao, ny tsenan'ny fangatahana dia ny sefo ary maro an'isa amin'ny ...
Ny fanoherana iPhones efa niasa tany India dia tojo fanoherana mafy
Toa ity fanoherana hividianana fitaovana efa niasa ity dia nihaona tamin'ny fanoherana mahery vaika avy amin'ny mpikambana maro hafa ao amin'ity sehatra ity,
Eny, i Baseball koa dia tian'i Siri
Miaina amin'ny vanim-potoanan'ny mpanampy virtoaly isika, fanampiny kely amin'ny rafitra fiasanay izay manao ny fiainana ho ...
Fitsapana ny vokatra amin'ny alimina 7000 an'ny iPhone SE
Ny fijerin'ny iPhone SE dia tena mitovy amin'ny iPhone 5s tsy isalasalana. Raha ny marina, mitovy endrika ihany ny endriny ...
Apple dia mampiasa hira 40 hankalazana ny faha-40 taonany
Apple dia zatra mampiasa ny sehatra fandefasana mozika mba hanana antsipiriany sasany, toy ny fahatsiarovana ny 40 taona niainany.
Ny herinandro mifarana anio, dia nanompo ka nametraka vahaolana ny olan'ny Cupertino tamin'ny farany izay ...
Amboary ny Oculus Rift anao miaraka amin'ny VR Viewer, ny iPhone ary ny KinoVR
Amin'ny KinoVR dia azonao atao ny mampiasa ny findainao finday sy ny VR Viewer hahazoana solomaso VR mahatalanjona mifanaraka amin'ny PC-nao.
Ny tetika vaovao dia manampy anao hamerina ny habaka rehefa lany ny habaka amin'ny iPhone-nao
Noho ny hafetsena hafetsena dia azontsika atao ny manadio ireo rakitra vetivety amin'ireo rindranasa ary hamerina amin'ny laoniny ny toerana misy.
Nohavaozina indray ny WhatsApp miaraka amin'ny "Bug Fixes"
Toy ny mahazatra dia manafina zavatra ao aoriany ity "Bug Fixes" ity, mania ho an'ireo mpamorona. Inona no hahagaga amin'ity indray mitoraka ity?
General Electric dia afaka nividy Apple tamin'ny 1996
20 taona lasa izay dia nanana fotoana nividianana Apple teny am-pelatanany ny General Electric, saingy toa tsy nahita ny tenany nahavita nitantana orinasa toy izany izy ireo
Apple nivadika 40: 2006 - 2016
Ary efa ananantsika eto ny fizarana farany sy matanjaka indrindra, ny fampisehoana ny iPhone, ny fampisehoana ny iPad, ny ...
Apple namboly ny sainan'ny piraty tao amin'ny foibeny mba hankalazana 40 taona
Apple dia nanantona ny sainam-piraty nampiasainy taona maro lasa izay isaky ny te hankalaza zava-bita izy.
Apple nivadika efapolo: 1996 - 2006
Eto indray isika, miaraka amin'ny fizarana fahatelo amin'ity fanangonana lahatsoratra 4 ity izay mamintina ny tantaran'ny ...
Apple nivadika efapolo: 1986 - 1996
Teo anelanelan'ny taona 1986 sy 1996 dia tamina fotoana malemilemy i Apple, nianjera tamin'ny tsenambola ny orinasa ary nanondro ny fatiantoka izany rehetra izany. Notantarainay anao ny tantara.
Apple nivadika efapolo: 1976 - 1986
Andro 1 aprily 2016 Apple dia tsy latsaky ny efapolo taona, ankalazao miaraka aminay, lazainay aminao isan-taona ny tantaran'ny Apple Inc.
SimSimi, fahombiazana mbola tsy nisy toa azy tao amin'ny App Store miaraka amin'ny lasa maizina
Inona no nafenin'i SimSimi? Fa maninona no lasa hafakely? Ilay biby tsy misy fanajana dia tsy vaovao velively, holazainay aminao ny lafiny miafina azy.
Ireo mpivarotra singa Apple dia manahy momba ny fangatahana ambany QXNUMX
Raha misy manana fisalasalana amin'ny fihenan'ny fivarotana iPhone, dia manamafy izany ireo mpivarotra
Lazainay aminao izay rehetra ao anatin'ny iPhone SE
Inona no ao anatin'ny iPhone SE? Vantany vao nosokafana izahay, dia lazainay aminao ny zavatra hitan'izy ireo, inona avy ny atiny sy ny atiny.
WhatsApp izao mamela anao hamaly sy hanonona hafatra amin'ny vondrona
Hitanay miafina ao amin'ny kaody ny kinova farany WhatsApp izay azo atao ny manonona hafatra manokana ao anaty vondrona
Apple dia manome patanty tariby tariby Magsafe
Apple dia nahazo ny patanty hahafahana mamorona fifandraisana varatra amin'ny alàlan'ny teknolojia Magsafe.
Instagram dia manampy amin'ny iOS ny fiasan-tsarimihetsika marobe hatramin'ny 60 segondra
Ankehitriny ny Instagram dia hamela anao mampakatra horonan-tsary hatramin'ny 60 segondra, mamela anao amin'ny iOS ihany koa hampifangaro maro amin'ireo roul.
Facebook Messenger dia hiaraka amin'ny Apple Pay tsy ho ela
Ny Facebook Messenger sy ny kaody ao aminy dia manafina ny fanondroana ny sehatra fandoavam-bola an'ny Apple, ka afaka manome alalana an'i Apple Pay tsy ho ela.
Microsoft dia mamorona kinova manokana an'ny Windows 10 miaraka amina varavarana mankany Shina
Hatramin'ny nanombohan'ny resabe teo amin'ny FBI sy Apple ho an'ny vahoaka Cupertino hamaha ilay fitaovana ary hahafahany ...
IPhone 6 dia may tao anatin'ny sidina manidina
Anjarany Apple tamin'ity indray mitoraka ity, iPhone 6 toa tompon'antoka tamin'ny nahatonga afo mampidi-doza nandritra ny sidina iray.
Nohavaozina ny WhatsApp, afaka manondrana chat izahay izao
WhatsApp dia havaozina isan'alina ary mamitaka manome antsika tsy inona fa ny "fanamboarana bibikely" fohy, fa miaraka amin'ny zavatra vaovao ao anatiny.
Xiaomi dia afaka nandefa Mi 2SE hifaninana amin'ny iPhone SE vaovao
Tsaho vaovao milaza fa hanaraka ny paikadin'i Apple ny goavambe Aziatika amin'ny alàlan'ny fanolorana ny fanavaozana ny Mi 2 miaraka amin'ny fitaovana sy ny endrik'ilay Mi 5.
Ireo no fampiharana mandany bateria betsaka indrindra amin'ny iPhone-nao
Te hahafantatra izay fampiharana iPhone malaza mampiasa bateria betsaka indrindra? Lazainay aminao izay ataon'ny Facebook, Instagram na WhatsApp amin'izany.
Nivadika ho Nazi sy fanavakavaham-bolon-koditra ny faharanitan-tsolika nataon'i Microsoft
Tay dia nanjary fasista, xenophobic ary fanavakavaham-bolonkoditra tao anatin'ny roa andro monja, ka nanapa-kevitra ny hampiato ny andrana Twitter i Microsoft.
Ny FBI dia mandoa $ 15.000 amin'ny orinasa israeliana hamaha ny iPhone amin'ny fanafihana
Toa tsy maintsy nitady orinasa israeliana ny FBI vao afaka mamoha ny iPhone 5c nampiasaina tamin'ny fanafihana San Bernardino
Apple manapaka ny vidin'ny fanamboarana Apple Watch
Toy ny vidin'ny varotra, ny tovolahy avy any Cupertino dia manapa-kevitra ny hampidina ny vidin'ny fanamboarana Apple Watch.
Ity herinandro ity dia nanjakan'ny vaovao mifandraika amin'ny iPhone SE vaovao sy iPad 9,7-inch iPad Pro natolotr'i Apple ny 21 martsa
Ny lalao Pac-Man tsara indrindra dia mipaka amin'ny Apple TV
Ny Pac-Man Championship Edition DX ho an'ny Apple TV dia azo alaina ao amin'ny fivarotana fangatahana ankehitriny, hilalao amin'ny fahitalavitrao sy amin'ny maha-fianakaviana.
Makà Day One 2.0 maimaim-poana noho ny fampiharana Apple Store
Andro voalohany 2.0 dia tsy mandany vola bebe kokoa ary tsy latsaky ny 4.99 euro, fa asehonay anao ny fomba fampidinana azy maimaim-poana
Mino ireo manam-pahaizana fa handresy ny FBI any amin'ny tribonaly i Apple
Miresaka momba ny Cellebrite izahay, orinasa natokana ho an'ny fanadihadiana forensika ny fitaovana finday, zavatra iray izay angamba taona vitsivitsy lasa izay dia tsy noeritreretina fa ...
tonga amin'ny fomba ofisialy koa ny tvOS 9.2 sy ny watchOS 2.2
Izahay dia mitondra anao ny vaovao rehetra momba ireo rafitra fiasa roa ireo, watchOS 2.2 ho an'ny Apple Watch ary tvOS 9.2 ho an'ny Apple TV an'ny taranaka fahefatra.
Liam, ilay robot miandraikitra ny fanaparitahana sy ny fanodinana iPhones
Liam no anarana nomena ny roblon miandraikitra ny famerenana amin'ny laoniny hatramin'ny faratampony amin'ny iPhone nanjavona.
OS X 10.11.4 sy iTunes 12.3.3 no fanavaozana farany indrindra avy amin'i Apple
Ao amin'ny Actualidad iPad dia ambaranay aminao ny vaovao rehetra momba ny OS X 10.11.4 sy iTunes 12.3.3.
Ireo isa marobe mipoitra avy amin'ny Keynote omaly
Lazainay aminao ireo lafiny sy isa mahaliana indrindra izay nipoitra taorian'ny Apple Keynote omaly.
«Classroom» no fampiharana Apple vaovao ho an'ny iPad's
Manohy ny fihenan-tsofina postkeynote izahay, Keynote izay nitondran'ny mahery fo ho iPhone SE vaovao sy ny ...
Liam no robot handrava ny iPhone taloha hamerenanao azy io
Apple dia nahazo ny tsara indrindra tamin'ny politikany momba ny tontolo iainana tamin'ny fehezantenin'ny tolakandro, ary rehefa nandalo izy dia nampahafantatra antsika an'i Liam, ilay robot fanapahana azy.
Apple dia manolotra ny fikarohana open sourceKit Companion CareKit
Ao amin'ny lahateny fototra amin'ity 21 martsa ity, Apple dia nanolotra CareKit, ilay mpikaroka ResearchKit izay hanome antsika fomba fijery mazava kokoa momba ny fahasalamantsika.
Ny iPhone 5s dia nanjavona tao amin'ny katalaogin'i Apple taorian'ny iPhone SE
Taorian'ny fampisehoana ny iPhone SE vaovao Apple dia nijanona tsy nivarotra ireo iPhone 5 tao amin'ny fivarotany intsony, mampahafantatra anao amin'ny antsipiriany momba ny hoavin'ny iPhone 5s izahay.
Manokatra ny vavanao amin'ny Keynote Inona no hasehon'i Apple?
Tsarovy ry zalahy, fa ny Keynote dia hanomboka amin'ny 18.00:19.00 hariva ora Espaniôla fa tsy amin'ny mahazatra XNUMX:XNUMX hariva ora Espaniola. Lazainay aminao izay antenaina.
Omano ny fitaovanao, azo inoana fa havoaka anio ny iOS 9.3
Amin'ny keynote atoandro atoandro dia azo inoana fa hamoaka ny iOS 9.3 ho an'ny rehetra i Apple, hampahafantatra anao izahay ary hampianatra anao ny fanomanana ny fitaovanao.
21 martsa ora ifotony
Tao anatin'ny ora vitsivitsy dia hanomboka ny keynote izay hahitantsika ny iPhone SE vaovao ihany. Raha te hanaraka azy ianao dia hampiseho aminao ny fotoana fanombohana fototra
Ary izany no fijerin'ny iPhone anao raha apetakao aminy ny tara-mangotraka
maro no nieritreritra (na tsia) hoe inona no hitranga raha toa ka mandraraka toaka mena amin'ny litatra amin'ny iPhone 6s vaovao izahay.
NBA 2k16 tonga ho an'ny Apple TV
Ny fanombohana fitaovana Apple TV miaraka amin'ny rafitra fandefasana azy manokana, tvOS, ary ny fivarotana fampiharana azy manokana ho an'ny ...
Fantaro ny fomba hanarahana ny lahatenin'i Apple amin'ny 21 martsa mivantana sy ny fandaharam-potoana hijerena ny fampisehoana ny iPhone SE sy iPad Pro Mini.
Rahampitso dia hiala amin'ny fisalasalana ihany isika amin'ny farany. Rahampitso 21 martsa, Apple dia hanolotra ny iPhone 5SE, ny iPad ...
Tim Cook dia naka ny fonon'ny Time noho ny raharaha nifanaovany tamin'ny FBI
Sambany nanao ampihimamba an'i Tim Cook tahaka ny nataon'i Steve Jobs i Tim Cook.
Araka an'i Wozniak "Apple dia tsy toy ny taloha intsony"
Wozniak dia nanolotra ny Reddit AMA malaza izay niresahany ny hetsik'i Apple hivarotra famantaranandro.
Apple Pay dia manampy banky vaovao any Shina sy Etazonia
Na dia eo am-piandrasana ny fanitarana farany ny Apple Pay any amin'ny firenena maro aza isika, Etazonia sy Shina dia samy manohy manampy banky izay mifanaraka amin'ny Apple Pay.